နေရာထိုင်ခင်း: ချစ်စရာကောင်းတဲ့ရေကန်အမြင်နှင့်အတူဗီလာAnundgård | Holmbygden.se
အပေါ် Posted 28 ဧပြီလ, 2014 အားဖြင့် Holmbygden.se
ငါသည်သင်တို့ကိုHolmsjön၏ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမြင်များနှင့်အတူဤ1½-ပုံပြင်အိမ်သူအိမ်သားကိုတွေ့လိမ့်မည်Anundgård. en gedigen villa centralt ဈ byn Anundgård.
ဥပမာများအတွက်သင့်လျော်သော. ကျန်ကြွင်းသောအရပ်များကဲ့သို့သာယာအဆင်ပြေမှုများလှပသောရေကန်အမြင်များနှင့်အတူတောင်ဘက် facing နှင့်အတူကျေးလက်ဒေသများတွင်လုံခြုံဘဝကိုပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်ဆောင်းရာသီတွင်ကားဂိုဒေါင်ထဲသို့ကားမောင်းနိုင်ပါလိမ့်ချင်သူကိုသားသမီးများနှင့်အတူတစ်မိသားစု.
Holmes အတွက်နေရာထိုင်ခင်းရှာဖွေနေနှင့်လှပသောHolmsjönမှာ Holmes ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားနေကြ?
အောက် နေရာထိုင်ခင်း ကျနော်တို့ Holmes အတွက်ရရှိနိုင်ပါအပေါငျးတို့သနေရာချထားရေးကိုစုသိမ်းရန်ကြိုးစား. တခါတရံသူက ပို. ပင်ကြှနျုပျတို့သိ, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ပျက်နေသည်ဖြစ်စေခြင်းငှါ. အစီရင်ခံစာ သို့ဖြစ်. သင်၏အတိုးကြိုဆိုပါတယ် ဒီမှာ.
မည်သည့်မေးခွန်းများကိုအတူကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့မေးခွန်းများကိုဖြေသို့မဟုတ်ကလေးများကဒီမှာ Holmes အတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကြီးပြင်းဖို့အတှကျကသင်မည်သို့ပြောပြနိုင်သူကိုဤနေရာတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ရသူမိသားစုများရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်.
ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့လယ်သမား Advertise, အခမဲ့!